Ikamelo ku-villa yokunethezeka enendlu yokugezela ehlanganyelwayo - I-Airbnb
Ikamelo ku-villa yokunethezeka enendlu yokugezela ehlanganyelwayo
Ikamelo e-i-guesthouse ibungazwe ngu-Kerry
Indlu itholakala amamayela angu-5 ukusuka e-Oban endaweni ethulile yokuxhuma. I-Lochnell arms hotel/i-pub ikude ngemizuzu engu-5-10. I-Oyster inn uhambo lwemizuzu engu-10 kanye ne-M Falls of lora hotel, uhambo lwemizuzu engu-15.
Asifaki isidlo sasekuseni esiphekiwe njengoba sobabili sisebenza kusenesikhathi, kodwa sinikeza okusanhlamvu, isinkwa, i-yogurt, izithelo, amakhekhe njll. Uma ungathanda ukuziphekela okuthile, ngizokunikeza ngenjabulo futhi ngikubonise indlela yokusebenzisa umpheki
Indlu yethu isendaweni ethulile ye-North connel, amamayela angu-5 kuphela ukusuka e-Oban. Kunezindawo ezintathu zokudlela/ama-bar ebangeni lokuhanjwa ngezinyawo (okuseduze kakhulu yimizuzu engu-5-10 yokuhamba ngezinyawo futhi ukude kakhulu yimizuzu engu-20). Konke okunikeza ukudla okumnandi. Ukubuka i-The Falls of Lora (ngaphansi kwamanzi ezimpophoma) kudinga nje ukuhamba ibanga elifushane. (Imizuzu engu-2-3)
Njengoba sobabili sisebenza amahora amaningi, ngeke sibe sendlini kakhulu! Lokhu kusho ukuthi indawo yakho izozizwa iyimfihlo. Ngizobe ngikhona ukuze ngingene futhi ngikubonise indawo